Posted by amaradipa at 8:51 AM No comments:
Posted by amaradipa at 8:33 PM No comments:
သမ္မတအိုဘားမား၏ သမိုင်းဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မိန့် ခွန်း (မြန်မာပြန်)
Obama's Speech in Yangon
Posted by amaradipa at 3:03 PM No comments:
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာပြည်ရောက်ပြီ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မိန့် ခွန်း(ရုပ်သံ)
Posted by amaradipa at 12:17 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေရူးအောက်မေ့ဖွယ်အမှတ်တရမိန့် ခွန်း (ရုပ်သံ)
Posted by amaradipa at 1:42 PM No comments:
မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ္တန်သင်တန်းအတွက် ကျမ်းစာအုပ်အလှုရှင်တဦးပေးလာတဲ့ "မဟာစည်-မဟာသတိပဋ္ဌာန
သုတ်နိဿယ"စာအုပ်ကို လက်ခံရရှိတာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကလို့ မှတ်မိတယ်။ လက်ဆောင်ရတဲ့စာ
အုပ်က ဆဋ္ဌမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူမှာ ပဉ္စမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူစာအုပ်ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် ၂ အုပ်ရှိတော့ အသစ်ဖတ်လိုက် ၊ အဟောင်းဖတ်လိုက်လုပ်နေခဲ့ရာက အသစ်စာအုပ်တနေရာမှာတွေ့ ရတဲ့ စာ တခုကြောင့် အံ့သြသင့်သွားရတယ်။ အဲဒါကတော့………………………
"ဤသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဖြင့် သန္တတိအမတ်ကြီးကဲ့သို့ ပင် သောကကိုလည်း လွန်မြောက်နိုင်၏။ ပဋာစာရာထေရီမ
ကဲ့သို့ ပင် ပရိဒေဝကိုလည်း လွန်မြောက်နိုင်ပေ၏။ ဤအရာ၌ တရားနာစဉ်တွင် မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက်သောသူများ
မှာ သတိပဋ္ဌာန်နည်းဖြင့်ပင် ကိစ္စပြီးသွားသည်ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ထိုသို့ မထင်သင့်ကြောင်းကို အဋ္ဌကထာ၌ ဤ
အထူးသတိပြုသင့်တဲ့ဝါကျဟာ " ဤအရာ၌ တရားနာစဉ်တွင် မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက်သောသူများမှာ သတိပဋ္ဌာန်
နည်းဖြင့်ပင် ကိစ္စပြီးသွားသည်ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ထိုသို့ မထင်သင့်ကြောင်းကို အဋ္ဌကထာ၌ ဤသို့ 
တရားနာတဲ့တထိုင်အတွင်း မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်၊ ဝိပဿနာဉာဏ်ကို ဆိုက်ရောက်သွားကြတဲ့ သူတော်စင်တွေဟာ သတိပဋ္ဌာန်တရား ၄ ပါးထဲက တပါးပါးကို ရှုပွားနေရင်း ရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို
ပွားများအားထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲ ဒီလို တရားထူး၊ တရားမြတ်ကို မရနိုင် မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာ အဲသည်
သတိပဋ္ဌာန်သုတ်အဋ္ဌကထာမှာ ပြောထားပြီးသားပါ။ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်း အဋ္ဌကထာထဲက
"ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မေသု ကိဉ္စိ ဓမ္မံ အနာမသိတွာ ဘာဝနာနာမ နတ္ထိ= ကာယ-ဝေဒနာ-စိတ္တ-ဓမ္မဟူသော သတိပဋ္ဌာန်၏အာရုံလေးပါးထဲက တပါးပါးကိုမျှ မသုံးသပ်၊ မရှုမှတ်မူ၍ ဝိပဿနာဉာဏ်-မဂ်ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်
သော ပညာဘာဝနာမည်သည်ဖြစ်ရုံးမရှိချေ" ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ကိုးကားပြီ့း ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း၊ သတိပဋ္ဌာန်တရားစတာတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်ဟောတော်မူတာ လေ့လာတွေ့ ရှိရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေပါ
လျက် အခုကောက်နုတ်ပြတဲ့ ဝါကျဟာ မဟာစည်ဆရာတော်ဆိုလိုတဲ့အာဘော်မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့သံသယဖြစ်
သံသယအခြေခံတော့ ပဉ္စမအကြိမ်ပုံနှိပ်တဲ့ မဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်သုတ်နိဿယစာအုပ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ဖတ်ကြည့်
တယ်။ ပဉ္စမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူမှာ တွေ့ ရတာက……..
ကဲ့သို့ ပင် ပရိဒေဝကိုလည်း လွန်မြောက်နိုင်၏။ ဤအရာ၌ တရားနာစဉ်တွင် မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက်ကြသောသူများ
မှာ သတိပဋ္ဌာန်နည်းဖြင့်မရှုရတော့ဘဲ နာကြားရသော တရားကို သဘောကျရုံမျှဖြင့်ပင် ကိစ္စပြီးသွားသည်ဟုထင်
မှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ထိုသို့ မထင်သင့်ကြောင်းကို အဋ္ဌကထာ၌ ဤသို့ ရှင်းလင်းပြထားလေပြီ……." လို့ သာ ဖြစ်နေ
ဒီဆန့် ကျင်ဘက်ဝါကျ ၂ ကြောင်းကို ဇယားကွက်ချကြည့်တော့ အခုလိုတွေ့ ရပါတယ်။
ပဉ္စမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူ၊ စာမျက်နှာ- ၉
ဆဋ္ဌမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူ၊ စာမျက်နှာ- ၈
ဤအရာ၌ တရားနာစဉ်တွင် မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက်ကြ
သောသူများမှာ သတိပဋ္ဌာန်နည်းဖြင့်မရှုရတော့ဘဲ နာကြားသောတရားကို သဘောကျရုံမျှဖြင့် ကိစ္စပြီးသွားသည်ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ထိုသို့ မထင်သင့်ကြောင်း
ဤအရာ၌ တရားနာစဉ်တွင်မဂ်ဖိုလ်သို့ ရောက်သော
ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ထိုသို့ မထင်သင့်ကြောင်း
ပဉ္စမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူက "တရားနာရုံ၊ တရားသိရုံနဲ့ ကိစ္စပြီးတယ်၊ တရားကို အကူးတကအားထုတ်နေစရာမလိုဘူး"
လို့ အမှားပြောနေသူတွေရဲ့အဓမ္မဝါဒကို အမှန်တရားဓမ္မနဲ့ တိုက်ဖျက်တယ်။ ဓမ္မကို ပြတယ်။
ဆဋ္ဌမအကြိမ်ပုံနှိပ်မူကတော့ သူတပါးအမှားကို ပြင်ဖို့ အသာထား၊ သူကိုယ်တိုင်က အဓမ္မဝါဒဖြစ်နေပါတယ်။
မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပေတွေဟာ သာသနာနယ်၊ စာပေနယ်မှာ အင်မတန်သြဇာကြီးကြောင်း၊ ပညာရှင်တွေ တန်ဘိုးထားလေးစားကြောင်း အထူးပြောစရာမလိုပါ။ ၁၉၈ဝ နှစ်တွေလောက်က တွေ့ ရတဲ့
မဟာစည်စာအုပ်တွေဟာ အပြင်အဆင်၊ သပ်ရပ်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ သော် နောက်ပိုင်းမှာမဟာစည်
ကျမ်းစာတွေထုတ်ဝေမှုမှာ ပြီးစလွယ် (ပစ္စလက္ခတ်) လုပ်လာတာတွေ့ ရတာ အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပါ
တယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ မဟာစည်အသိုင်းအဝိုင်းတို့ က မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်
ရအောင် ကျမ်းစာတွေကို မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်မထားဘဲ ပညာရှင်အင်အားနဲ့ ပြန်လည်စီစစ်သင့်ပြီလို့တိုက်တွန်း
မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်နိဿယမှာ အခုပြောခဲ့အမှားအပြင် အခြားပြင်ဆင်စရာတွေလည်း အများအပြား
ရှိနေပါတယ်။ အရင့်အရင်နှစ်တွေက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ပုံနှိပ်မူတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင် သိသာနိုင်တာမို့ လို့ 
အကျယ်တဝင့် မပြောတော့ပါ။ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး အမှန်ရေးခဲ့တာကို ငါတို့ လက်ထက်ရောက်မှ အမှားဖြစ်ရင် ငါတို့ ညံ့လို့ ပဲ၊ ငါတို့ မညံ့အောင် ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲ သာသနာပြုတဲ့အနေထုတ်ဝေတာမျိုးဖြစ်အောင် ငါတို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂ဝ၁၂
Posted by amaradipa at 2:14 PM No comments:
တာဝတိံသာနတ်ပြည်က ဂီတလုလင်စောင်းဆရာ ပဉ္စသီခနတ်သားဟာ သိကြားမင်းရဲ့ဘုရားဖူး၊ တရားနာခရီးစဉ်
ရှေ့ တော်ပြေးအဖြစ်နဲ့ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးရာနေရာ မလှမ်းမကမ်းသို့ ရောက်လာပြီး သူ့ ရဲ့ချစ်ဒုက္ခ
ကဗျာသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆို၊ ကိုယ်တိုင်စောင်းတီးပြီး ဘုရားရှင်ကို ရွှေနားတော်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဒီဃနိကာယ်၊ မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်၊ သက္ကပဥှသုတ္တန်မှာ အပြည့်အစုံတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
အခုတင်ပြလိုတာက ပဉ္စသီခချစ်ဒုက္ခကဗျာသီချင်း (ဂါထာ) စာရင်းကိစ္စအကြောင်းပါ။ အကြောင်းခံကတော့ ဟောဒီ မဟာသုတကာရီမဃဒေဝလင်္ကာသစ်၊ ပိုဒ်ရေ ၁၁ အဆိုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
"နတ်ပြည်မိုးမြင့် ၊ ဘုံခြောက်ဆင့်က
မာရ်မင်းစောင်းရင်း ၊ ဥသျှစ်ဆင်းကို
ဝင်းဝင်းပိုက်ကာ ၊ ငြိမ်းအေးစွာလျှင်
ဂါထာဆဲ့ငါး ၊ မြတ်စွာကြားအောင်
ဘုရားလူ့ ဘ ၊ သမ္ဗုဒ္ဓ၏
ဣန္ဒသာလာ ၊ ဂုဟာနီးကပ်
သာတင့်ရပ်က ၊ ဂန္ဓဗ်သနင်း
ဒေဝီရောင်ပ ၊ သူရိယဝစ်
မ-မာန်ယစ်လျှက် ၊ လက်ရစ်သံစုံ
ဥဿုံမချို့ ၊ ငွေညှို့ ခုနစ်ချောင်း
သံစုံညောင်းလျက် ၊ သံမောင်းသံညှင်း
ရှင်တော့်ထံမှောက် ၊ ကျူးသီလျှောက်သို့ ….."
တွေ့ တဲ့အတိုင်းပါပဲ …..။
ပဉ္စသီခနတ်သားဟာ မြတ်စွာဘုရားကို ဂါထာ ၁၅ ပုဒ်နဲ့သူရိယဝစ္ဆသာနတ်သမီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုခံစား
နေရပါတယ်ဆိုတာ လျှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း "ဂါထာဆဲ့ငါး ၊ မြတ်စွာကြားအောင်"….လို့ မန်လည်
တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အကြောင်းတခုနဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ "ပဉ္စသီခနတ်သားရဲ့မယ်ဘွဲ့ "ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ 
ပါဠိရော၊ မြန်မာပြန်ပါကူးရေးထားတာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကိုသတိရပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ မဃဒေဝလင်္ကာသစ်ဆရာတော်ကြီးရေးသလို ၁၅ ဂါထာမဟုတ်ဘဲ ၁ ဂါထာလျော့ပြီး ၁၄ ဂါထာသာ
ရှိနေတာတွေ့ ရပါတယ်။ ဆိုင်ရာအဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတို့ မှာ ဂါထာအရေအတွက်ကိုဖော်ပြထားတာရှိလေမလား
လို့ လည်းအတွေးပေါက်ကာ ကြည့်မိပြန်တယ်။ ဋ္ဌ-ဋီတို့ မှာဂါထာအရေအတွက်ကို တိတိကျကျဖော်ပြတာ
မတွေ့ ပါဘူး။ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သက္ကပဥှသုတ္တန်တရားတော်ကြီးစာအုပ်ထဲမှာလည်း ပဉ္စသီခ
နတ်သားဘုရားကို လျှောက်တာ ၁၄ ဂါထာလို့ သာ ဖော်ပြထားတာတွေ့ ရပြန်တယ်။
မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ကြီးရဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်၊ ၅၊ ၆၇-၇၆ မှာလည်း ပဉ္စသီခနတ်သားရဲ့ စောင်းချင်းဂါထာများကို ၁၄ ဂါထာလို့ သာ အတိအကျဆိုထားပြန်ပါတယ်။ မဟာစည်ဆရာတော်၊ မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်တို့ ဆိုတာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာမူကို ပဓာနထားသုံးစွဲလို့ ဒီလို ၁၄ ဂါထာလို့ တညီတညွတ်တည်းဆိုတော်မူသလောလို့ 
ဆင်ခြင်စရာလည်း ရှိပြန်ရဲ့ …။ သို့ သော် မဟာဗုဒ္ဓဝင် ၅ မှာပါတဲ့ ပဉ္စသီခစောင်းချင်းဂါထာအနက်တွေကို ပဉ္စမသင်္ဂါယနာအကြီးအမှုးတပါးဖြစ်တော်မူတဲ့ ဆီးဘန်းနီဆရာတော်ကြီးရေးသားတော်မူတဲ့ ကဝိမဏ္ဍနမေဒနီကျမ်း
ဒါကြောင့် မန်လည်ဆရာတော်ကြည့်ရှုတဲ့မူဟာ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင်မူ ဖြစ်နိုင်လို့ကဝိမဏ္ဍနမေဒနီကျမ်းလိုပဲ
ဂါထာ ၁၄ ခုသာဖော်ပြတဲ့ မူဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ မိုးထိမူစာချနက်၊ သုတ်မဟာဝါနိဿယမှာလည်း ၁၄ ဂါထာကို
သာ မြန်မာပြန်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ပဉ္စသီခနတ်သားရဲ့ချစ်ဒုက္ခသီချင်းပါဠိ၊ မြန်မာများဟာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာမူ၊ ဒီဃနိကာယ်၊ မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်
၊ သက္ကပဥှသုတ္တန်၊ စာမျက်နှာ ၂၁၂၊ ၂၁၃ နဲ့ယင်းမြန်မာပြန် ၂၃၈-၂၄ဝ တို့ မှာပါတဲ့အတိုင်း မူအတိုင်းကူးယူထား
တာဖြစ်ပါတယ်။ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ရဲ့ သုတ်မဟာဝါဘာသာဋီကာ၊ ၃၊ ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာအနက်ကိုလည်း
(၁) ဝန္ဒေ တေ ပိတရံ ဘဒ္ဒေ ၊ တိမ္ဗရုံ သူရိယဝစ္ဆသေ။
ယေန ဇာတာသိ ကလျာဏီ ၊ အာနန္ဒဇနနီ မမ။
(၁) ချစ်နှမသူရိယဝစ္ဆသာ….. အကြင်နတ်မင်းကြောင့် ကောင်းခြင်းလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍ ငါ့အားနှစ်သက်မြတ်နိုး
ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် သင်သည် ဖြစ်ပေါ်လာရပေ၏။ သင်၏ဘခင် ထို တိမ္ဗရုသကနတ်မင်းကို ငါ ရှိခိုး၏။
(၂) ဝါတောဝ သေဒတံ ကန္တော၊ ပါနိယံဝ ပိပါသတော။
အင်္ဂီရသိ ပိယာမေသိ ၊ ဓမ္မော အရဟတာမိဝ။
(၂) ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အရောင်ထွက်သော ချစ်နှမ.. ချွေးထွက်နေသူတို့ သည် လေအေးကို နှစ်သက်သကဲ့သို့၊ ရေငတ်နေသူတို့ သည် ရေအေးကို နှစ်သက်သကဲ့သို့ ၊ ရဟန္တာတို့ သည် (လောကုတ္တရာ) တရားကို
နှစ်သက်တော်မူသကဲ့သို့ငါသည် သင့်ကို ချစ်ကြိုက်လျက်ရှိပါ၏။
(၃) အာတုရေဿဝ ဘေသဇ္ဇံ ၊ ဘောဇနံဝ ဇိဃစ္ဆတော။
ပရိနိဗ္ဗာပယ မံ ဘဒ္ဒေ ၊ ဇလန္တမိဝ ဝါရိနာ။
(၃) (ချစ်နှမ) … ဆေးသည် သူနာ၏ရောဂါကိုငြိမ်းစေသကဲ့သို့ ၊ အစာသည် ငတ်မွတ်နေသူ၏ဆာလောင်ခြင်း
ကို ငြိမ်းစေသကဲ့သို့ငါ၏အချစ်မီးကို ငြိမ်းစေပါလော့….။
(၄) သီတောဒကံ ပေါက္ခရဏီ ၊ ယုတ္တံ ကိဉ္ဇက္ခရေဏုနာ။
နာဂေါ ဃမ္မာဘိတတ္တောဝ ၊ သြဃာဟေ တေ ထနူဒရံ။
(၄) (ချစ်နှမ)… အလွန်ပူအိုက်သောဆင်ပြောင်ကြီးသည် ကြာဝတ်မှုန်ပြွမ်းလျက် အေးမြသောရေရှိသည့်ရေကန်
ထဲသို့ (သက်ဆင်းသကဲ့သို့ ) ငါသည် သင်၏ရင်ခွင်ထဲသို့ သက်ဆင်းလိုပါ၏။
(၅) အစ္စကုင်္သောဝ နာဂေါဝ ၊ ဇိတံ မေ တုတ္တတောမရံ။
ကာရဏံ နပ္ပဇာနာမိ ၊ သမ္မတ္တော လက္ခဏူရုယာ။
(၅) (ချစ်နှမ)… ချွန်းအုပ်မရအောင် အမုန်ကျနေသော ဆင်သည် လှံလျင်လှံမကို ငါနိုင်ပြီဟု မာန်ယစ်လျက် မည်သည့်အကြောင်းကိုမျှ မသိသကဲ့သို့လက္ခဏာနှင့်ညီညွတ်သည့်ပေါင်ရှိသော သင်နှမကြောင့် အချစ်မာန်ယစ်
နေသော ငါသည် မည်သည့်အကြောင်းကိုမျှ မသိတော့ပါ။
(၆) တယိ ဂေဓိတစိတ္တောသ္မိ ၊ စိတ္တံ ဝိပရိဏာမိတံ။
ပဋိဂန္တုံ န သက္ကောမိ ၊ ဝင်္ကဃသ္တောဝ အမ္ဗုဇော။
(၆) (ချစ်နှမ)…. ငါ၏စိတ်သည်သင်နှမအပေါ်၌ တဖက်သတ်တိမ်းညွတ်လျှက် စွဲမက်နေချေပြီ။ ငါးမျှားချိတ်ကို မျိုမိသော ငါးကဲ့သို့ ပင် ငါ၏စိတ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်နစ်စေရန် မစွမ်းနိုင်တော့ပါ။
(၇) ဝါမူရု သဇ မံ ဘဒ္ဒေ ၊ သဇ မံ မန္ဒလောစနေ ။
ပလိဿဇ မံ ကလျာဏိ ၊ ဧတံ မေ အဘိပတ္ထိတံ ။
(၇) တင့်တယ်သောပေါင်လုံးရှိသောချစ်နှမ… ငါ့ကိုဖက်လှည့်ပါလော့၊ မခို့ သရိုကြည့်လေ့ရှိသောချစ်နှမ.. ငါ့ကိုဖက်လှည့်ပါလော့။ ကောင်းခြင်းလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောချစ်နှမ… ငါ့ကိုဖက်လှည့်ပါလော့။ ဤသို့ ဖက်ခြင်း
ကို ငါသည် အလွန်ပင်တောင့်တလျက်ရှိပါ၏။
(၈) အပ္ပကော ဝတ မေ သန္တော၊ ကာမော ဝေလ္လိတကေသိယာ။
အနေကဘာဝေါ သမုပ္ပါဒိ ၊ အရဟန္တေဝ ဒက္ခိဏာ။
(၈) ချစ်နှမ…. ငါ၏ချစ်ခင်တပ်မက်မှုသည် ပကတိအားဖြင့် အနည်းငယ်မျှဖြစ်သော်လည်း ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၌ လှုဒါန်းခြင်းဒါနစေတနာသည် အတိုင်းမသိတိုးပွားသကဲ့သို့အဖျားကော့သောဆံပင်ရှိသည့် သင်နှမ၌ ငါ၏ချစ်ခင်တပ်မက်မှုသည် အမျိုးမျိုးတိုးပွားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏။
(၉) ယံ မေ အတ္ထိ ကတံ ပုညံ ၊ အရဟန္တေသု တာဒိသု။
တံ မေ သဗ္ဗင်္ဂကလျာဏိ ၊ တယာ သဒ္ဓိံဝိပစ္စတံ။
(၉) အလုံးစုံသော ကောင်းခြင်းငါးဖြာလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသော ချစ်နှမ… သည်းခံခြင်းစသည် တာဒိဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံ
ကုန်သော တာဒိဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့ ၌ ပြုခဲ့သော ငါ၏ကောင်းမှုဟူသမျှသည် သင်နှမနှင့်
(၁ဝ) ယံ မေ အတ္ထိ ကတံ ပုညံ ၊ အသ္မိံပထဝိမဏ္ဍလေ။
(၁ဝ) အလုံးစုံသောကောင်းခြင်းငါးဖြာလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောချစ်နှမ…. ဤမြေပြင်၌ ငါပြုထားသော
ကောင်းမှုဟူသမျှသည် သင်နှမနှင့်အတူ အကျိုးပေးပါစေသတည်း။
(၁၁) သကျပုတ္တောဝ ဈာနနေ ၊ ဧကောဒိ နိပကော သတော။
အမတံ မုနိ ဇိဂိသာနော ၊ တမဟံ သူရိယဝစ္ဆသေ။
(၁၁) (ချစ်နှမ)… သာကီဝင်မင်းသားမြတ်စွာဘုရားသည် ဈာန်ဖြင့်တစိတ်တည်းရှိလျှက် သတိပညာနှင့်ယှဉ်လျက် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာသကဲ့သို့ ငါလည်းသင့်ကိုရှာနေပါ၏။
(၁၂) ယထာပိ မုနိ နန္ဒေယျ ၊ ပတွာ သမ္ဗောဓိမုတ္တမံ။
ဧဝံ နန္ဒေယျံ ကလျာဏိ ၊ မိဿီဘာဝံ ဂတော တယာ။
(၁၂) ကောင်းခြင်းလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောချစ်နှမ…. မြတ်စွာဘုရားသည် မြတ်သောသမ္ဗောဓိဉာဏ်သို့ ရောက်၍ ဝမ်းမြောက်တော်မူသကဲ့သို့ ဤအတူပင် ငါသည်သင်နှင့်ပေါင်းသင်းရသည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ရပါစေသား….။
(၁၃) သက္ကော စေ မေ ဝရံ ဒဇ္ဇာ ၊ တာဝတိံသာနမိဿရော။
တဝဟံ ဘဒ္ဒေ ဝရေယျာဟေ ၊ ဧဝံ ကာမော ဒဠှော မမ။
(၁၃) (ချစ်နှမ) သူရိယဝစ္ဆသာ… တာဝတိံသာနတ်တို့ ၏အရှင်သိကြားမင်းသည် ငါ့အားလိုရာဆုကိုပေးခဲ့လျှင် ငါသည် သင်နှမကိုသာ တောင်းယူပါအံ့။ ငါ၏ချစ်ကြိုက်ခြင်းသည် ဤမျှလောက်ခိုင်မြဲလျှက် ရှိပါ၏။
(၁၄) သာလံဝ န စိရံ ဖုလ္လံ ၊ ပိတရံ တေ သုမေဓသေ။
ဝန္ဒမာနော နမဿာမိ ၊ ယဿာ သေတာဒိသီ ပဇာ။
(၁၄) လိမ္မာရေးခြားရှိလှပေသော ချစ်နှမ… ဤသို့ ကောင်းခြင်းလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသည့် သမီးရတနာရှိသော ပွင့်သစ်စအင်ကြင်းပန်းသဖွယ်တင့်တယ်သော သင့်ဘခင်တိမ္ဗရုသကနတ်မင်းကြီးကို ဦးညွတ်ရှိခိုးပါ၏။
မူလကျမ်းရင်းဖြစ်တဲ့ သက္ကပဥှသုတ္တန်မှာ ပဉ္စသီခနတ်သားရဲ့ သီချင်းဂါထာကို ၁၄ ပုဒ်မျှသာပြဆိုထားလို့ မဃဒေဝ
လင်္ကာသစ်ကျမ်းမှာဖွဲ့ ဆိုတဲ့ "ဂါထာဆဲ့ငါး ၊ မြတ်စွာကြားအောင်"….ဆိုတဲ့စကားဟာ ကျမ်းအဆိုနဲ့ ကွဲလွဲနေကြောင်း
အထူးပြောဖွယ်မလိုပါဘူး။ မန်လည်ဆရာတော်ကြီးကြည့်ရှုတော်မူတဲ့ သက္ကပဥှသုတ္တန်မှာ ဂါထာ ၁၅ ပုဒ်ပါခဲ့သည်
မှန်သော် ကြားကာလတခုမှာ ဂါထာ ၁ ပုဒ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သို့ မဟုတ် ဂါထာ ၁၄ ပုဒ်
အမှန်ရှိနေတာကို အကောက်အယူချွတ်ချော်ပြီး ပမာဒလေခအနေနဲ့၁၅ ပုဒ်လို့ ရေးသားမိတာလည်း ဖြစ်နိုင်
ကောင်းပါတယ်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ…. မြန်မာစာပေနဲ့ ပိဋကတ်ပညာရှင်များအတွက် စဉ်းစားတွေးတောဖွယ်
အကြောင်းအရာတခုရသွားကြမယ်ဆိုရင် စာရေးသူအတွက် ဒီဆောင်းပါးကိုရေးရကျိုးနပ်တယ်လို့ယုံကြည်
နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂ဝ၁၂